Otu esi eme ka onu ahia gi di nma na igwe okwu | ECommerce ozi ọma
Etu ị ga - esi melite ọnụnọ azụmahịa gị na igwe okwu mkpanaka
El ụwa azụmahịa taa ọ na - akwali site na mmali na oke mgbe ọ bịara na teknụzụ nkwukọrịta ọhụrụ. Nke a bụ eziokwu mgbe a bịara n'ịzụ ahịa n'elu ikpo okwu. N'ebe a, anyị na-ekwu obere ihe ị nwere ike ime melite ọnụnọ nke azụmahịa gị na mobile n'elu ikpo okwu.
1 Zụlite ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka
2 Zụlite ngwa mkpanaka
3 Na-akwalite ngwa azụmahịa gị
4 Ekwentị mgbasa ozi
Zụlite ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka
Nwee mobile website ma ọ bụ anabata web imewe, bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa na otu n'ime ụzọ kachasị mma iji banye azụmaahịa ekwentị. Ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịnwe ụlọ ahịa ngwaahịa, ụgbọ ibu azụmahịa, na mgbakwunye na ikpo okwu ịkwụ ụgwọ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-azụ ngwaahịa sitere na ngwaọrụ mkpanaka ha, akụkụ a dị mkpa iji kwado ọnụnọ azụmahịa gị na ahịa ekwentị.
Zụlite ngwa mkpanaka
na ngwa ngwa enwere ike ibudata ha ma tinye ya na ngwaọrụ mkpanaka, yabụ ọ bụkwa ụzọ ọzọ iji gosipụta ọnụnọ gị n'elu ikpo okwu a. Ebumnuche nke ngwa ọ bụla nwere ike ịdị iche na-adabere na azụmaahịa ahụ, agbanyeghị na ọ bụ eziokwu nke nwere ike ime ka usoro ịzụta dị mfe ma nwekwuo ahịa.
Na-akwalite ngwa azụmahịa gị
En Playlọ Ahịa Google ma ọ bụ Applọ Ahịa, I nwere ike idowe ngwa azụmahịa gị maka ndị ọrụ ekwentị iji budata ma wụnye ya na ngwaọrụ ha. Storeslọ ahịa ngwa a abụghị naanị inye gị ọwa mmiri nkesa ọzọ, mana ha na - emekwa ka ọ dịrị ndị ahịa gị nwere ike ịchọpụta ngwa gị.
Mgbasa ozi maka a mobile na-ege ntị Ọ nwekwara ike ịkwado ọnụnọ gị na igwe mkpanaka ebe ụdị mgbasa ozi a na-enye nsonaazụ dị mma karịa mgbasa ozi ọdịnala na ibe weebụ.
Tinyere ihe ndị a dị n'elu, echefula kwalite ngwa gị yana mkpokọta weebụ site na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche ma tụlee ịnye ụgwọ ọrụ, Kupọns ego ma ọ bụ onyinye nye ndị ahịa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Azụmahịa » Etu ị ga - esi melite ọnụnọ azụmahịa gị na igwe okwu mkpanaka
Ihe 5 kpatara ị kwesịrị iji bido azụmahịa dijitalụ